आधा दर्जन कम्पनीको १ करोड ३२ लाख बढी कित्ता हकप्रद सेयर आउँदै, कुनको कति ? - Arthatantra.com
आधा दर्जन कम्पनीको १ करोड ३२ लाख बढी कित्ता हकप्रद सेयर आउँदै, कुनको कति ?
काठमाडौं । करिब आधा दर्जन कम्पनीले १ करोड ३२ लाख बढी कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।
बोर्डमा समृद्धि फाइनान्स, शिखर इन्स्योरेन्स, छाङ्दी हाइड्रोपावर, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नारायण डेभलपमेन्ट बैंकले १ करोड ३२ लाख १० हजार ६४० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि विभिन्न मिति निवेदन दिएका हुन् ।
जसमध्ये समृद्धि फाइन्सको २७ लाख २९ हजार ७०५ रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि गत साउन १५ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल मार्केट रहेको छ ।
यता शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले १०ः३ को अनुपातमा ५२ लाख ७५ हजार ५७२ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कशनका लागि जेठ २५ गते बोर्डमा निवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएस एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
यस्तै, ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि छाङ्दी हाइड्रोपावरले बैशाख १५ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । १०ः३ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
त्यसैगरि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले ३० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि गत पुस २६ गते बोर्डमा निवेदन दिएको हो । कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
१३ करोड १२ लाख ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको १३ लाख १२ हजार ३३८ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले असार ८ गते बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले १ः१ को अनुपात हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको हो । बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ १४ सोमवार १५:०३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे किन्ने होइन त बजाजका विभिन्न मोडेलका बाइक, यस्तो छ नयाँ मूल्य ! (सूचीसहित)
पछिल्लाे तीज र बुबाको मुख हेर्ने दिनलाई लक्षित गरी नर्भिक अस्पतालको आकर्षक प्याकेजको घोषणा